Dainik Akhabar | » Uncategorized Uncategorized – Dainik Akhabar
८ जेठ, काठमाडौं । ‘वर्षा र सहकालका देवता’ रातो मच्छिन्द्रनाथको विचारी पूजा गरिने भएको छ । हरेक वर्ष मच्छिन्द्रनाथलाई बुङ्मती लगिएको चार दिनमा सो पूजा गर्ने चलनअनुसार आज हुने भएको हो । मच्छिन्द्रनाथलाई पाटनबाट बुङ्मती लगिएको चौथो दिनमा कसरी राखिएको छ भन्ने बुझ्न काठमाडौँ उपत्यका तीनै शहरका भक्तजन बुङ्मती आउने चलन रहेको ३२ पानेजु सङ्घका…
८ जेठ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचनका लागि सरकारले तोकेको समय पर्याप्त रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शनिबार बिहान छलफलमा सहभागी प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुले सरकारले तोकेको मितिभित्रै निर्वाचन गराउन सकिने जानकारी गराएका हुन् । आयोगका पदाधिकारीलाई शनिबार बिहान बालुवाटारस्थित निवासमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले परामर्श गरेका थिए । परामर्शमा सहभागी एक…
सभामुखमा न्यान्सी पोलेसि
अमेरिकी प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा न्यान्सी पोलेसि निर्बाचित भयकि छिन !उनको उमेर 80 बर्ष को छ !
प्रतिनिधि सभा विघटनको कुनै प्राबधान संविधानमा छैन
के आन्दोलनले समाज बाद ल्याउन सक्छ!
नेपाली जनता को प्रस्न आन्दोलनले समाजबाद ल्याउन सक्छ !
नेकपा प्रचण्ड माधब ले आन्दोलन कार्यक्रम को घोषणा गरेकाछन !
समाजबादको आधार तय गरौं
समाजवाद्को आधार तयारीको बाताबरण मा लाग्न सवै एक जुट हौ !
आन्दोलन घोषणा !
नेकपा प्रचण्ड माधब (प्र मा) ले संबैधानिक कु विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन !
ऐन कानुन बिधिबिधान टेक्छौ!
काठमाडौ : निर्वाचन आयोगले पार्टी बिवादमा चुनाव चिन्हको निराकरण बिधिबिधान र ऐनकानुन मा ब्यबस्था भय बमोजिमनै हुने बतायको छ ! साथै पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदाका बखतका सदस्यहरुनै अधिकारिक हुने समेत भनेको छ !